Ebe nchekwa data - AGG Power Technology (UK) CO., LTD.
Ọ bụrụ na a nkesa mkpọka n'ihi a dị mfe ike ọdịda, dum ụlọ ọrụ nwere ike nke ọma ga-kpọnwụrụ na ndị ole na ole ọcha nkeji nke outage nwere ike ime ka ọkpụrụkpụ aku losses. The isi e-azụmahịa na ụlọ ọrụ ndị na-eduga na ụzọ na-achọ ihe ngwọta a dị mkpa nsogbu: Olee otú anyị pụrụ hụ ihe-adịghị agha agha ọkọnọ nke ike nke na-anaghị etinye ndụ n'ihe ize ndụ na nnukwu ego nke data dị mkpa ka ha na-eme ọrụ ha.
Sịkwa ya mere, na isi mba e-azụmahịa na ụlọ ọrụ ndị ndidi ọrụ n'aka jikeere onwe ha na ike generator esetịpụrụ otú ha nwere ike nwere ihe mberede ike ọkọnọ na-agaghị ekwe ka ha na ihe omume nke ọ bụla n'ụzọ nke okporo ọdịda, n'agbanyeghị otú ime otú ahụ a ga-ekwe omume nwere ike ịbụ. The ike nwere na-anọ na!
The ike ọgbọ ụlọ ọrụ na-na-emegharị onwe ya na idiosyncrasies ndị a nrụnye na generator tent na-kpọmkwem haziri maka Data Centers na na-sized na dị na DCP (Data Center Power) ike nkwupụta, na na-soro na ụkpụrụ na-achị ha. The uptime Institute bụ mba dị ahu nke na-ezipụta na certifies otú nrụnye nke a Data Center kwesịrị e.
AGG Power nwere ịsụ ụzọ na teknụzụ na-anọgide na-isetịpụ ụkpụrụ maka àgwà na ntụkwasị obi ụwa. AGG 'dizel generators' oge-anwale ike iji nweta 100% ibu nabata na kacha mma na-na-na klas njikwa, data center ahịa pụrụ inwe obi ike ha na-azụ ike ọgbọ usoro na ndị na-eduga ọnu pụrụ ịdabere na ẹkemede ndiberi edem.